IPhone 7 mahwendefa haaratidze Smart chinongedzo | IPhone nhau
Iwo mahwendefa ekugadzira eiyo iPhone 7 haaratidze Smart chinongedzo
Imwe yenyaya dzinonakidza dzinogona kuuya nekutangwa kweinotevera iPhone ndiyo Smart Connector. Iyi smart connector yatovepo pane ese maPad Pro uye inokutendera kuti ushandise iyo Smart Khibhodi panguva imwecheteyo painogamuchira simba kubva kuPad. Mazhinji runyerekupe uye kudonha (senge ndizvo o ndizvo) ita shuwa kuti iyo Smart Connector ichave iripo mu iPhone 7 Plus (kana Pro), asi ruzivo rwechizvino-zvino rwunoita kunge rwunopikisa mimwe mishumo.
Izvo zvaunazvo mumifananidzo inotungamira iyi positi ndiwo mahwendefa ekugadzira eiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus / Pro. Mifananidzo yacho inouya kwatiri ichibva kuChinese sosi iyo yakavaisa kuBaidu uye inotiratidza mahwendefa cNC yatichashanda kugadzira iyo iPhone 7 / Plus. Mumahwendefa tinogona kuona makamera ezvese zvishandiso, achive akawedzeredzwa mune iyo Plus / Pro modhi, iyo inosimbisa kuti iyo maviri lens kamera ingangove iripo mune 5.5-inch modhi.
Pachave pasisina Smart Connector pane iyo iPhone 7 Plus?
Izvo zvisipo mumifananidzo iyo HDBLOG yakaburitsa ndiyo Smart Connector. OnLeaks yakaburitsa akati wandei ma 3D anodhindisa umo isu taigona kuona smart smart chinongedzo pane iyo iPhone 7 Plus uye pachedu Ndinovimba zvakanyanya paOnLeaks izvo zvemashoko matsva aya (izvo zvisingaonekwe hazvirambe zvine mutsindo kuti hazvipo). Iyo Smart Connector yeiyo 5.5-inch modhi yaizoshandiswa kushandisa yakakosha zvishongedzo zveiyo Plus modhi iyo yaizounzwa munaGunyana pamwe neese mairi maPhones matsva.
Kunyangwe iyo Smart Connector inosvika kune inotevera iPhone, zvinoita senge chakavanzika chakavanzika ndechekuti iyo iPhone 7 Plus ichauya iine maviri-lens kamera, inozovandudza zvakanyanya kunaka kwemifananidzo uye nekupa mikana mitsva, senge inokwanisa kutarisa mifananidzo mushure mekutora (chimwe chinhu HTC yatove kuita) kana kuti inogona kugadzira 3D mhedzisiro. Kuti uwane izvo Apple zvaakatigadzirira, isu tichazofanira kumirira ingangoita mwedzi mina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwo mahwendefa ekugadzira eiyo iPhone 7 haaratidze Smart chinongedzo
Vatengesi veOLED vanosunga maodha mana pamberi pe2017 iPhone
WhatsApp inotishamisa neimwe inofungidzirwa kuti "Bugfixes" svondo rino